Ururka Shaqaalaha wuxuu dacweeyaa Qantas Airways oo ku saabsan shaqo ka joojinta baahsan iyo guulaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ururka Shaqaalaha wuxuu dacweeyaa Qantas Airways oo ku saabsan shaqo ka joojinta baahsan iyo guulaha
Airlines • Airport • Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Maxkamadda federaalka Australia ayaa xukuntay dacwadda Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee ka dhanka ah Qantas.
Qantas waxay shaqada ka eriday in ka badan 2,000 oo gacanyarayaal dhulka ah intii uu socday masiibada.
Qantas waxay shaqaalaysiisay shaqooyin si ay lacag ugu keydiso shirkadda.
Qantas waxay diiwaangelisay AU $ 18 bilyan ($ 13.2 bilyan) dakhliga sanadka 2019.
Go'aan taariikhi ah, maxkamadda federaalka Australia waxay la safatay Ururka Shaqaalaha Gaadiidka kiiska ay TWU keentay Shirkadda Qantas Airways Limited.
Ururka ayaa maxkamadda geeyay shirkadda weyn ee diyaaradaha Australia ka dib markii fadeexaddii dibedda laga soo saaray ay arkeen in ka badan 2,000 oo shaqaale Qantas ah oo shaqada laga joojiyay intii ay socotay masiibada COVID-19.
Qantas wuxuu eryay in ka badan 2,000 oo gacan -hayeyaal dhulka ah intii lagu jiray masiibada, kuwaas oo doorarkooda dibedda loo saaray si ay lacag ugu keydsadaan shirkadda, taas oo 2019 diiwaan gelisay AU $ 18 bilyan ($ 13.2 bilyan) oo dakhli ah.
Garsoore Michael Lee wuxuu sheegay inuusan ku qanacsanayn caddeynta ay soo bandhigtay Qantas - oo ah shirkadda duulimaadyada ugu badan ee Australia - in shaqo ka joojinta kumanaan shaqaale ah aysan ahayn, ugu yaraan qayb ahaan, dhiirrigelinta xubinnimada ururkooda.
TWU waxay shaqaaleysiisay Josh Bornstein oo ah qareenka ugu sarreeya si uu ugu doodo in ficillada diyaaradda ay ka hor imanayso Sharciga Fair Work. Kiisku wuxuu ku qotomay sheegashooyinka ah in dhaq -dhaqaaqyada qallafsan ee Qantas - oo uu hoggaaminayo agaasimaha guud Alan Joyce - loo sameeyay inay ku burburiyeen awoodda ururka wadaxaajoodka mushaharka.
"Maxkamadda Federaalku waxay heshay markii ugu horreysay in loo -shaqeeye weyn uu ceyriyay in ka badan 2,000 oo shaqaale ah sababta oo ah wuxuu doonayay inuu ka xayuubiyo awoodda ay si wadajir ah ula gorgortamaan shirkadda heshiis cusub oo ganacsi," ayuu yiri Bornstein.